किन खेलबाड गरिदै छ सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग? | Suvadin !
स्वास्थ्य चाैकीमा न स्वास्थ्यकर्मी छन्, न अाैषधी नै
किन खेलबाड गरिदै छ सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग?
स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको अभाव हुँदा संस्थाले दिने सेवा अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका हुन्। ७ जनाको दरबन्दी रहेको हाल स्वास्थ्य चौकीमा एकजना अनमी देवकी गौतममात्र कार्यरत छिन्। स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी कोही बिदामा र कोही दरबन्दी मिलान गरेर अर्को ठाउँमा गएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको अनमी गौतमले जानकारी दिइन्। स्वास्थ्य चौकी त्रिवेणी नगरपालिका केन्द्रको १० मिनेटको दूरीमा छ।
May 14, 2018 14:49
बाजुरा, ३१ वैशाख – बिरामीको उपचारका लागि खोलिएका स्वास्थ्य चाैकीहरूमा बिरामीहरूको भिड छ। तर, सेवा प्रदान गर्नेको कुनै टुङ्गो छैन्। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकास्थित तोली स्वास्थ्य चौकीको सेवा अस्तव्यस्त छ।
स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको अभाव हुँदा संस्थाले दिने सेवा अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका हुन्। ७ जनाको दरबन्दी रहेको हाल स्वास्थ्य चौकीमा एकजना अनमी देवकी गौमतमात्र कार्यरत छिन्।
स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी कोही बिदामा र कोही दरबन्दी मिलान गरेर अर्को ठाउँमा गएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको अनमी गौतमले जानकारी दिइन्। स्वास्थ्य चौकी त्रिवेणी नगरपालिका केन्द्रको १० मिनेटको दूरीमा छ।
स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उपचारसहित प्रसुति सेवासमेत प्रभावित भएको छ। बिहान बेलुका एकैजनाले सेवा दिन नसकिने हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताइन्।
स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक २५ जनाभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। तर, स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवा नपाएर घर फर्किनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय वीरेन्द्रबहादुर साउदले गुनासो गरे।
स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारीसँगै औषधिको पनि अभाव छ। गर्मीका बेला पखालाको संक्रमण बढ्ने हुँदा यहाँ सलाइनलगायतका सामान्य औषधि पनि अभाव छ। स्वास्थ्य चौकी त्रिवेणी नगरपालिकाको स्वामित्वमा छ। तर, नगरपालिका स्वास्थ्य सेवाबारे नगरपालिका बेखबर बनेको छ।
औषधि गत वर्षको मंसिरदेखि कमी भए पनि चरम अभाव चैतदेखि भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा दुईजना अहेब, दुईजना अनमी, दुईजना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन्। तर, प्रायः सबैजना स्वास्थ्य चौकीमा उपस्थित हुने गरेका छैनन्। हेल्थ असिस्टेन्ट पद पनि रिक्त छ।
स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज वीरबहादुर अयडी उक्त नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपछि कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको छ। कार्यालयको अस्तव्यस्तताका कारण संस्थागत सुत्केरी गराएबापत पाउने सुत्केरी भत्तासमेत सुत्केरीले नपाएको गुनासो आउन थालेको छ।
सुत्केरी अवस्थामै सुरक्षा र आवश्यक पोषणका लागि पाउनुपर्ने भत्ता नै उधारो हुँदा सुत्केरी असन्तुष्ट बनेका छन्। संस्थामा सुत्केरी गराएबापत १ हजार ५ सय र ४ पटकसम्म नियमित गर्भजाँच गराएबापत थप पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छ।
कार्यालय सहयोगीले डेढ वर्षदेखि भ्याक्सिन ढुवानीबापतको रकमसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। नगरपालिकाले यसबारे कुनै चासो नदिएको र तीन हप्तादेखि आर्थिक कारोबार बन्द गरेको छ।